AOKA Lockheed P-3C Orion FSX & P3D
kitiho eto mba hahazo ny FS2004 mifanaraka vesion ihany.
Faly izahay mampahafantatra ny P-3C Orion, fiaramanidina miaramila angano, novakin'ny ekipan'ny FS KBT. Ny Lockheed P-3 Orion dia fiaramanidina mpiambina an-dranomasina miasa amin'ny fiaramanidina efatra eto amin'izao tontolo izao. Ny P-3 Orion dia fiaviana avy amin'ny fiaramanidina sivily Lockheed L-188 Electra no nilaozana tetikasa. (Loharanom-baovao: Wikipedia)
Ivelany sy ny hoso-doko izany modely no noforonina amin'ny an-tsipiriany kokoa noho (V29) asa teo aloha. Indrindra indrindra, ny tena elatra fifandraisana (sisiny sy ny maotera Nasser, sns) no teti-dratsy ny vaovao. Maro karazana P-3C dia vonona toy ny nampiseho P-3C izay nandritra ny tetezamita izao. Izany dia sivy karazany amin'ny Wikibolana anglisy.
mahafinaritra add-on miaraka amin'ny mpitsoka marika 3D feno sy feo mahazatra. Ny fanaovana modely amin'ny kalitao avo lenta, tadiavo ireo lahatsoratra maro toy ny NAVY sy ny Air Force Kanada. Ny modely amin'ny sidina dia azo inoana fa marina ihany. Ankoatr'izay, ity fiaramanidina ity dia feno tampoka, toy ny baomba mandatsa-dranomaso sy fiasana manokana. Manana ny vola rehetra izy io, fa freeware izany.
Nohavaozina taminy 01 / 12 / 2018 : Mifanaraka amin'ny Prepar3D v4 +, Auto-installer dikan-teny 10.5.
Nohavaozina taminy 05 / 07 / 2016 : Dikan-teny 3.31 mifanentana amin'ny DirectX10 sy ny maro hafa, Auto-installer dikan-teny 10.
Downloads 38 552